ऋतुराज वसन्तको आगमनसँगै वातावरणमा वसन्त बहारको प्रदुर्भावले प्रत्येक व्यक्तिको मन झङ्कृत भइरहेको छ , त्यसैले पनि होला वसन्त ऋतु र प्रेम दिवसको अनोन्याश्रित सम्बन्ध भएको । फक्रँदै गरेको प्रकृतिको यो मोहकपनले प्रत्येक व्यक्तिमा प्रेमिल भावनालाई अंकुरण गरेको छ । यो प्रेमको भावना वा प्रेम सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन वा सुनमा सुगन्ध थप्न आउनुहोस् पौराणिक शास्त्रको माध्यमबाट आफ्नो प्रेमी–प्रेमिकाको स्वभाव बुझौँ । उपहार दिँदा राशिअनुसारको रङ छनोट गरौँ, जसले तपाईंंको प्रेम दिवस अझै रंगिन बनोस् ।
यो राशिवाला प्रेमी वा प्रेमिकालाई गोल्डेन वा पहेँलो रङको उपहार दिँदा आपसी प्रेम तथा समझदारी बढेर जानेछ । गज्जबबाट
प्रकाशित : आइतबार, माघ २८, २०७४०९:२४
कर्मचारी जान मानेनन् प्रदेश, १७४ जना मध्ये २१ मात्र उपस्थित
‘सारेगमप’ बाट बाहिरिइन् मेनुका पौडेल!
नलगाड नदीको फड्केबाट खसेर मृत्यु
जहाज कारखानामा विस्फोट हुदाँ पाँचको मृत्यु
स्कुटर लिएर बिहानै क्याम्पस हिँडेकी युवतीको शव फेवातालमा भेटियो !
यस वर्षदेखि यार्सागुम्बा संकलन दस्तुरमा वृद्धि: यस्तो छ नयाँ दस्तुर